On: २०७७ आश्विन ९ गते, शुक्रबार, ०६:५४ बजे प्रकाशित
एजेन्सी। स्मार्टफोन कम्पनीहरु अहिले स्मार्ट टि.भी निकाल्ने होडबाजीमा छन्। वानप्लस, नोकिया, साओमी, रियलमीका साथै अनरले पनि स्मार्ट टिभी बजारमा ल्याइरहेको बेला ओप्पोले पनि प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समावेश गरेको छ।
२०२० ओप्पो डेभलपर्स सम्मेलनमा कम्पनीका अधिकारीहरुले कम्पनीले परिस्थिति प्रणाली विस्तार गर्नका लागि अक्टोबरमा स्मार्ट टि.भी. निकाल्न लागेको हो। ओप्पोका प्रबन्धक यी विले उक्त नयाँ टेलिभिजनका बारेमा धेरै कुरा भने खुलाउन चाहेनन्।
स्मार्ट टि.भी बजारमा ल्याउन खोज्नुले चिनियाँ कम्पनी ओप्पो आफूलाई निकै विस्तार गर्न खोजिरहेको कुरा प्रस्ट हुन्छ। अहिलेसम्म बाहिरिएको हल्लालाई आधार मान्ने हो भने कम्पनीले दुई आकारमा उक्त टि.भी निकाल्न लागेको छ।
पहिलो सानो आकारको टि.भी. ५५ इन्च र ठूलो आकारमा भने ६५ इन्चको टि.भी. रहेको छ। यी दुई टि.भी. को रिमोट कन्ट्रोलका साथै विशेषता पनि फरक–फरक हुने आकलन गरिएको छ। बीबीके इलेक्ट्रोनिक्सका भगिनी संस्था वानप्लस र रियलमीले पनि हालसालै स्मार्ट टि.भी बजारमा ल्याएका थिए।
ओप्पो पनि यही कम्पनीको भएकाले स्मार्ट टि.भी निकाल्न कम्पनीलाई गार्हो नपर्न सक्छ। अहिलेसम्म यति मात्रै जानकारी बाहिरिएको छ र कम्पनीले फेरि एकचोटि यसको बारेमा चाँडै बोल्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२०७७ आश्विन ९ गते, शुक्रबार, ०६:५४ बजे प्रकाशित